daadah.com - Is-nadaamis – Scabies
Is-nadaamis – Scabies
Home » Cuddurada » Maqaarka » Is-nadaamis – Scabies
Cuddurka is-nadaamiska waa cuddur aad la isagu gudbiyo oo leh cun-cun iyo xajiimood badan. Waxaa keena dullin yar oo boodada oo kale ah, laakiin il-ma-aragtay ah, lana yiraahdo Sarcoptes scabiei. Dullinka keena is-nadaamiska waxay ku nooshahay maqaarka aadamiga oo ay godod ka qodato meelaha laalaabka jirku ka yahay sida faraha dhexdooda iyo kil-kilaha. Is-nadaamisku waa dullin 8 lugood leh, jir wareegsan leh oo ay adagtahay in isha aadamigu aragto.
Dullinka Is-nadaamiska keena – courtesy of wikimedia.com
Is-nadaamisku marka nooca dhedig qaangaarto waxay qodotaa maqaarka, halkaas oo ay ugxan ku dhasho. Cuddurkaani wuxuu ku gudbaa marka ay timaado taabasho toos ah oo maqaarku maqaar kale la yeesho.
Qofkastaa waa qaadi karaa is-nadaamiska. Carruur, ciyaalka kurayda ah iyo dadka waawaynba way u nugul yihiin inay qaadaan cuddurkaan. Inta badan cuddurkaani wuxuu ku fidaa meelaha dadku ku badan yihiin sida iskuulada, kaamamka jaamacadaha, xerooyinka qaxootiga iyo meelaha carruurta lagu xannaaneeyo, waayo goobahaasi dadku aad buu isagu dhowaadaa jirrarkoodu ama way wadaagaan shukumaanada iyo dharka.
Calaamadaha ugu horeeya ee ilmo qaba is-nadaamis waa cun cun jirka meelaha uu ka laalaabmo sida faraha lugaha, gacmaha, cumaacumaha, agagaarka kore ee xubnaha taranka iyo xaglaha jilbaha iyo suxulada.
gacan is-nadaamis helay – Courtesy of wikimedia.com
Cun cun saa’id marka ilmaha loo qubeeyo iyo habeenkii, waayo xilligan waa marka dullinka is-nadaamisku ka qodanayo maqaarka jirka meel uu ku gabado
Xajiin badan oo maqaarku yeesho maadaama jirku dareemayo dullinkaan ajnabiga jirka ku ah.
Inta badan Finnanka soo baxaa waa layn layn sida qaniinyo kaneeco oo kale ah
Finnanka yar yari waxay afka ku samaystaan biyo- dheecaan aakhirka maqaarka ku keena caabuq iyo gadduudasho
Finnanku waxay noqdaan nabro keena dhaawac laga yaabo in baakteeriyada maqaarka dushiisa joogtaa keento Impetigo.
Oogada ay waxyeelaysay dullinku oo qalayl noqota.
Dhaqtarkaaga ayaa ilmaha u qoraya daawooyinka jirka lagu subko ee dila dullinka is-nadaamiska keena. Daawooyinkaasi way badan yihiin, oo waxaana ugu caansan boomaatada Permethrin, Benzyl benzoate, crotamiton, lindane, iyo malathion.
Daawada ugu amaanka badan waa Permethrin oo la mariyo maqaarka ilmaha laga bilaabo luqunta ilaa lugaha iyo haddii uu saameeyay is-nadaamisku wajiga kore, dhakada iyo daamanka ilaa luqunta. Daawooyinkaani waxay u baahan yihiin taxadar badan oo haddii ay galaan afka ama indhaha carruurta waxay keeni karaan xasaasiyad iyo sumoow.
Waxay ku habboon tahay carruurta yar yar habeenkii marka ilmuhu gam’o in la mariyo daawada maqaarka, subaxii marka uu soo toosana horay looga qubeeyo. Waxaa jira ilmo faraha nuuga habeenkii marka ay seexdaan oo u baahan in gacmaha loo galiyo sharabaado waqtiga ay hurdaan oo maqaarkoodu daawaysan yahay.
Mararka qaarkood carruurta ay ku adkaato waalidiinta in daawada lagu subko maqaarkooda, dhakhaatiirtu waxay u qoraan daawo afka laga qaadanayo oo dilaysa dullinka.
Haddii cuncunku yaraan waayo waxay u baahan tahay mar kale in daawaynta lagu celiyo. Inta badan cuncunka is-nadaamiska wuxuu sii socdaa 3 asbuuc marka dullinka is-nadaamisku dhinto. Haddii cuncunku dhib ku keenayo ilmaha isticmaal duxda ama kareemka Calamine. Sidoo kale ka jar ciddiyaha ilmaha si aysan u dhaawicin maqaarka nuglaaday.
Dharka carruurta is-nadaamisku helay waxaa lagu mayraa biyo kulul, si dullinka looga dilo. Mararka qaar dhakhaatiirtu qoyska oo dhan waxay ka daaweeyaan is-nadaamiska si aan mar danbe la isagu gudbin.
Xasaasiyada Cuntada - Food Allergy